AMBOARY ITY PC ITY DIA TSY AFAKA MIHAZAKAZAKA WINDOWS 11 ERROR - MALEMY
Tsy afaka mametraka Windows 11 ary mahazo Ity PC ity dia tsy afaka mitantana hadisoana Windows 11? Ity misy fomba ahafahan'ny TPM 2.0 sy SecureBoot, hanamboarana ny lesoka This PC Can't Run Windows 11 ao amin'ny PC Health Check application.
Ny fanavaozana nandrasana hatry ny ela an'ny Windows 10, ilay rafitra fikirakirana solosaina be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, dia nambaran'ny Microsoft tapa-bolana lasa izay (Jona 2021). Araka ny efa nampoizina, Windows 11 dia hampiditra endri-javatra vaovao maro, ny rindranasa tompon-tany, ary ny interface amin'ny mpampiasa ankapobeny dia hahazo fanamboarana endrika endrika, fanatsarana ny lalao, fanohanana ny rindranasa Android, widgets, sns. Ireo singa toa ny menio Start, foibe fanaovana , ary ny Microsoft Store koa dia nohavaozina tanteraka ho an'ny kinova farany an'ny Windows. Ireo mpampiasa Windows 10 ankehitriny dia avela hanavao ny Windows 11 tsy misy sarany fanampiny amin'ny faran'ny 2021, rehefa omena ny besinimaro ny kinova farany.
loharanom-pahalalana tsy misy
Dingana tokony hamboarina raha toa ka tsy afaka mihodina hadisoana Windows 11 ny PC anao
Rafitra takiana amin'ny Windows 11
Fomba 1: Ahoana ny fomba hampandehanana ny TPM 2.0 avy amin'ny BIOS
Fomba 2: Alefaso ny Boot azo antoka
Miaraka amin'ny antsipiriany amin'ny fanovana rehetra izay havoakan'ny Windows 11, nanambara ihany koa ny Microsoft ny takiana fibaikoana farany ambany indrindra hampandehanana ilay OS vaovao. Ireto misy toy izao:
Mpikirakira maoderina 64-bit miaraka amin'ny hafainganana famantaranandro 1 Gigahertz (GHz) na avo kokoa ary 2 na mihoatra ny cores (Ity misy lisitra feno Intel , AMD , ary Processeur Qualcomm izany dia afaka mihazakazaka Windows 11.)
Farafahakeliny RAM gigabytes (GB) 4 farafaharatsiny
Fitaovana fitehirizana 64 GB na lehibe kokoa (HDD na SSD, na iray amin'izy ireo dia handeha)
Fampisehoana misy famahana farany ambany 1280 x 720 ary lehibe kokoa noho ny 9-inch (diagonally)
Ny rafitra firmware dia tsy maintsy manohana UEFI sy Secure Boot
Trusted Platform Module (TPM) kinova 2.0
Ny carte graphique dia tokony hifanaraka amin'ny DirectX 12 na aoriana miaraka amin'ny mpamily WDDM 2.0.
Mba hanamorana ny zavatra ary hamela ireo mpampiasa hanamarina raha mifanaraka amin'ny Windows 11 ny rafitr'izy ireo ankehitriny amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra tokana, dia namoaka ny Fampiharana PC Health Check . Na izany aza, tsy eo amin'ny Internet intsony ny rohy fampidinana ho an'ny fampiharana, ary afaka mametraka ny loharano misokatra kosa ny mpampiasa WhyNotWin11 Fitaovana.
Mpampiasa maro izay afaka nanatontosa ny tànany tamin'ny app Health Check no nitatitra ny fahazoana This PC tsy afaka mihazakazaka hafatra pop-up Windows 11 rehefa mihazakazaka ny fizahana. Ny hafatra pop-up koa dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny antony tsy ahafahan'ny Windows 11 mihazakazaka amin'ny rafitra iray, ary tafiditra ao ny antony - tsy tohana ny processeur, ambany noho ny 64GB ny toerana fitahirizana, ny TPM ary ny Secure Boot dia tsy tohanana / kilemaina. Raha ny famahana ireo olana roa voalohany dia mitaky fanovana singa-fitaovana, ny olana TPM sy Secure Boot dia azo vahana mora foana.
Ny Module Platform azo itokisana na TPM dia chip fiarovana (cryptoprocessor) izay manome fiasa mifototra amin'ny hardware, mifandraika amin'ny fiarovana amin'ny solosaina Windows ankehitriny amin'ny alàlan'ny fitehirizana fanalahidy azo antoka. Ny chips TPM dia misy rafitra fiarovana ara-batana marobe izay manasarotra ny hackers, ny fampiharana maloto ary ny virus hanova azy ireo. Nandidy ny fampiasana TPM 2.0 i Microsoft (ny kinova farany an'ny TPM chips. Ilay teo aloha dia nantsoina hoe TPM 1.2) ho an'ny rafitra rehetra vita post-2016. Ka raha tsy archaic ny solosainanao dia azo inoana fa efa nopetahana mialoha teo amin'ny motherboard anao ny puce security fa tsy mandeha fotsiny.
Ary koa, ny fitakiana TPM 2.0 ahafahana mihazakazaka Windows 11 dia nahagaga ny ankamaroan'ny mpampiasa. Talohan'izay, Microsoft dia nanisy lisitra ny TPM 1.2 ho fampiasa farafahakeliny farafahakeliny saingy nanova azy io ho TPM 2.0.
Ny teknolojia fiarovana TPM dia azo tantanana avy amin'ny menio BIOS fa alohan'ny handefasana azy dia alao antoka fa ny rafitrao dia manana TPM mifanaraka amin'ny Windows 11. Mba hanaovana izany -
1. Kitiho havanana amin'ny bokotra menio Start ary safidio Mihazakazaha avy amin'ny menio mpampiasa herinaratra.
2. Karazana tpm.msc eo amin'ny sehatry ny lahatsoratra ary tsindrio ny bokotra OK.
3. Andraso am-paharetana ny fisokafan'ny TPM Management on Local Computer application, zahao sata ary ny Dikan-teny famaritana . Raha ny fizarana Status dia hita taratra ‘Ny TPM dia vonona hampiasaina’ ary ny kinova dia 2.0, ny fampiharana Windows 11 Health Check dia mety ho diso eto. I Microsoft mihitsy no niresaka an'ity olana ity ary nanala ilay fampiharana. Navoaka avy eo ny kinova fanatsarana ny fampiharana Health Check.
Vakio ihany koa: Alefaso na alao ny fidirana azo antoka amin'ny Windows 10
Na izany aza, raha milaza ny Status fa maty ny TPM na tsy hita dia araho ireo dingana etsy ambany ahafahana mamela azy:
1. Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny TPM dia tsy afaka mandeha amin'ny menio BIOS / UEFI fotsiny, ka atombohy amin'ny fanidiana ny fikandrana fampiharana rehetra ary tsindrio Alt + F4 raha vao eo amin'ny birao ianao. Mifidiana Hidio avy amin'ny menio fisafidianana ary kitiho ny OK.
2. Ankehitriny, avereno indray ny solosainao ary tsindrio ny bokotra BIOS hiditra ny menio. ny Lakile BIOS tsy manam-paharoa ho an'ny mpanamboatra tsirairay ary mety ho hita amin'ny fanaovana fikarohana Google haingana na amin'ny famakiana ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa. Ny lakilen'ny BIOS mahazatra indrindra dia F1, F2, F10, F11, na Del.
3. Raha vao tafiditra ao amin'ny menio BIOS ianao dia tadiavo ny ARO takelaka / pejy ary ahodino ho azy amin'ny alàlan'ny kitendry arrow. Ho an'ny mpampiasa sasany, ny safidy Security dia ho hita eo ambanin'ny Advanced Settings.
4. Manaraka, tadiavo ny Fikirana TPM . Ny marika marina dia mety miovaova; ohatra, amin'ny rafitra Intel-fitaovana sasany, dia mety ho PTT, Intel Trusted Platform Technology, na TPM Security sy fTPM fotsiny amin'ny milina AMD.
5. Apetraho ny Fitaovana TPM toerana to Available SY Fanjakana TPM ny afaka . (Hamarino tsara fa tsy mifangaro amin'ny toerana misy ifandraisany amin'ny TPM hafa ianao.)
6. afa-tsy ny toerana vaovao TPM ary avereno indray ny solosainao. Alefaso indray ny jery Windows 11 hanamafisana raha afaka manamboatra Ity PC ity dia tsy afaka mihodina hadisoana Windows 11.
Secure Boot, araka ny tondroin'ilay anarana, dia sehatra fiarovana izay mamela ny rindrambaiko matoky sy ny rafitra fikirakira hamita fotsiny. ny BIOS nentim-paharazana na ny booty lova dia hampiditra ny bootloader nefa tsy manao fanamarinana na dia ankehitriny aza UEFA ny teknolojia boot dia mitahiry mari-pankasitrahana ofisialy Microsoft ary manamarina ny zava-drehetra alohan'ny hametrahana azy. Izany dia manakana ny malware tsy hanakorontana amin'ny fizotran'ny boot ary, noho izany, dia miteraka fanatsarana ny filaminan'ny ankapobeny. (Ny boot azo antoka dia fantatra fa miteraka olana rehefa mandefa fizarana Linux sasany sy rindrambaiko hafa tsy mifanaraka.)
Mba hijerena raha manohana ny haitao Secure Boot ny solosainao, karazana msinfo32 ao amin'ny boaty Run Command (Windows logo key + R) ary kitiho ny enter.
Zahao ny Firenena azo antoka Boot marika
tsy misy varavarankely misy Windows 10 wifi
Raha mivaky hoe 'Tsy tohanana' ianao dia tsy ho afaka hametraka Windows 11 (tsy misy fikafika); etsy ankilany, raha mivaky ny 'Off', araho ny dingana eto ambany.
1. Mitovy amin'ny TPM, Secure Boot dia azo alefa ao anatin'ny menio BIOS / UEFI. Araho ny dingana 1 sy 2 amin'ny fomba teo aloha ho ampidiro ny menio BIOS .
2. Mifamadiha amin'ny Kiraro vakizoro sy ampidiro ny Secure Boot mampiasa ny bokotra zana-tsipika.
Ho an'ny sasany, ny safidy ahafahana manao Secure Boot dia ho hita ao anaty menio Advanced na Security. Vantany vao ampidirinao ny Secure Boot dia hisy hafatra mangataka fanamafisana. Safidio ny Ekeo na eny raha hanohy.
Fanamarihana: Raha nesorina ny safidin'ny Secure Boot dia alao antoka fa ny Mode Boot dia napetraka amin'ny UEFI fa tsy Legacy.
3. afa-tsy ny fanovana sy ny fivoahana. Tsy tokony handray intsony ity PC ity dia tsy afaka mandefa hafatra diso Windows 11.
Microsoft dia avo roa heny amin'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny TPM 2.0 sy Secure Boot mba hampandehanana Windows 11. Na izany aza, aza matahotra raha tsy mahafeno ny fepetra faratampony farany ho an'ny Windows 11 ny solosainanao, satria ny vahaolana amin'ny olana tsy mifanaraka dia azo antoka fa fantaro raha vantany vao mivoaka ny fananganana farany ho an'ny OS. Azonao atao ny matoky fa handrakotra ireo vahaolana ireo izahay isaky ny misy izy ireo, miaraka amin'ireo torolàlana Windows 11 hafa.
ny fomba hahazoana lalao etona maimaimpoana ara-dalàna
havaozina amin'ny Windows 10 kinova 1809
kaody fijanonana: mpamily_irql_not_less_or_equal
fampifandraisana ip manan-kery eo an-toerana
Irq tsy ambany na mitovy